विवाह पछि चम्किन्छ यस राशि हुनेहरुको भाग्य, मिल्छ सुखै-सुख | सुदुरपश्चिम खबर
विवाह पछि चम्किन्छ यस राशि हुनेहरुको भाग्य, मिल्छ सुखै-सुख
आजभोलि हरेक युवा युवतीहरु कम उमेरमा विहेको कुरा सुन्नासाथ टाढा हुने गर्छन । उनीहरु २० देखि २५ वर्षको उमेरमा समेत आफनो बाल्यकाल नसकिएको महशुस गर्छन। धेरै पढेर राम्रो जागिर वा व्यापार भएपछि मात्र विहे गर्ने सोचका कारण पनि उनीहरु विहेको प्रस्ताव अस्वकार गर्ने गर्छन। कोही व्यक्ति विवाह पश्चात खुशी र सुखी रहन सक्छन भने केहिको निराश हुने स्थिति समेत आउने गर्छ।
कुनै मानिस विवाह पछि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेर सामान्य रुपमा जीवनयापन गर्न सक्छन भने कोहि यी कुराहरुमा असफल हुन सक्ने भएकाले जीवनमा विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी तपाई एक राशीका व्यक्तिहरुको बारेमा बताउन जाँदै छौँ जसले छिट्टै विहे गरेमा भाग्य चम्किने गर्छ।
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कर्कट राशी भएका व्यक्तिहरुले छिट्टै विहे गरेमा उनीहरुको भविष्य उज्ज्वल हुने र जीवन सहज रुपमा चल्ने गर्छ। यो राशिका मानिस प्रेममा उत्साहित, भावुक र मानसिकरुपमा संवेदनशील हुन्छन् । उनीहरु हरेक परिस्थितीमा आफुलाई तेही अनुरुप लैजान सक्दछन, यिनीहरूको जीवनशैली ऐश्वर्यपूर्ण हुने गर्दछ, यस्ता व्यक्ति अत्यन्त धैर्यवान हुने र उनीहरु जस्तोसुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गरेर अगाडी बढ्न सक्छन।
कर्कट राशी भएका व्यक्तिहरुको विवाहको कुरा घरपरिवारकै सदस्यहरुबाट रोकिने गरेको भएपनि यो कुरा यिनीहरुलाई मनपर्दैन। यस राशीको मानिसको भाग्योदय विवाहपछि नै हुने भएकाले उनीहरु विवाह पश्चात निकै खुशी र सुखी रहन सक्छन। यो राशीका व्यक्तिहरुको जीवनमा विवाहले ठूलो परिवर्तन ल्याउने गर्छ। यो राशीका व्यक्तिहरु निकै परिश्रमी र इमान्दार हुने भाग्यले समेत साथ दिने हुँदा विवाह पश्चात सोचे अनुसार सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हुँदै जानेछ।bulbulpost बाट सभार
भाग्यमानी मान्छेले मात्रै देख्ने जिउँदो दाहिने शंख, ॐ लेखी १...
शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक कार्यमा प्रयोगमा ल्याइन्छ। शङ्ख शंखेकिराको खबटाबाट बनाइने एक प्रकारको वाद्ययन्त्र हो। यो विशेषगरी धार्मिक...
त’नाव ह’टाउने सरल सूत्र
त’नाव किन हुन्छ ? त’नावले के गर्छ ? यसको सही व्यवस्थापन के हुन सक्छ ? अहिलेको सन्दर्भमा ग’म्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने विषय हो यो ।...
हामी दैनिक घर सरसफाइ त गर्छाै तर घर सजाउँदा हुने यी...
हामी घरलाई आकर्षक बनाउन चाहन्छौं तर, जानेर वा नजानेर त्यो भद्रगोल बन्न पुग्छ । घर सजाउने कुरामा हाम्रो ढंग नपुग्दा अनाकर्षक हुनपुग्छ । राम्रै...
राती कुन दिशामा फर्केर सुत्नु शुभ हुन्छ त ?जानुहोस
वास्तु शास्त्रका अनुसार गहिरो निद्रामा हामी शक्ति स्रोतहरूसँग जोडिएका हुन्छौँ। यो सम्बन्धले एक शान्त र आफ्नो अस्तित्वको बारेमा उत्साहित बनाउँछ। कति लामो समय सुत्नु...
काठमाडौँ । संसारका अधिकांश मानिसमा आफ्नो भविष्य जान्ने उत्कट चाहना हुन्छ। त्यसैले मानिसका भविष्यफल बताउने अनेकन शास्त्रहरु र प्रचलनहरु संसारभर विद्यमान छन्। हामीकहाँ चिना,...
के’राको बो’क्रा प्रयोग गरेर ह’टाउन सकिन्छ आँ’खा मुनिको डा’र्क सर्क’ल
हा’मी धेरैलाई के’राको फाइदाका बारेमा त थाहा नै होला । तर, केरा के’राको बोक्राका बारेमा भने कमैलाई मात्र थाहा हुन स’क्छ । केराको बोक्रामा...
पुरुसले, महिलाको स्तन दिनमा १० मिनेट हेरे, यति धेरै आयु बढ्ने...
पुरुसले, महिलाको स्तन दिनमा १० मिनेट हेरे, यति धेरै आयु बढ्ने ! हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई घूरनुलाई एक अ’पराधको श्रेणीमा रााखिएको छ । जबकि त्यसको ठीक...
औषधीय गुण भएको पुदिनाको सहायताले डण्डीफोर सजिलै हटाउनुहोस
अचारको रुपमा खाँदा समेत निकै स्वादिलो हुने पुदिनाका धेरै औषधीय गुणहरु रहेका छन् । पुदिनाको मुनामा प्रचुर मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ भने यसको प्रयोगले...